In Kabadan 2 Kun Oo Ardayda Sanadkan Ku Xaroonaysa Jaamacada Jigjiga Ah Ayaa Xaflad Soo Dhawayn Ah Loogu Qabtay Hoolka SMCX. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Sabti.15.Nov.2014, hogaaminta XDSHSI ayaa xafladan kusoo dhaweeyay 2500 oo ardayda cusub ah ee ku xaroonaysa sanadkan jaamacada Jigjiga. Xaflada ayaa dhiiri galinaysay ardayda islamarkaana lagu muujiyay sida uu XDSHSI u garab taagan yahay dhamaan qaybaha kala duwan ee ardayda iyo guud ahaanba halganka ladagaalanka jahliga iyo saboolnimada.
Xafladan oo ay kasoo qayb galeen masuuliyiin sare oo hogaaminta xisbiga kamida oo ay ugu horeeyaan madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Nogob mudane Cabdi Cali Mataan, masuuliyiin kasocday jaamacada iyo ardayda, ayaa dhiiri galinaysay ardayda islamarkaana fahan buuxa lagu siiyay yoolka xisbiga ee ku aadan waxbarashada iyo horumarinta shacbka iyo deegaanka.
Waxaana ugu horayntii madasha kahadlay madaxa xarunta dhexe mudane Cabdicasiis Maxamed oo fahan buuxa ardayda kasiiyay himilooyinka xisbiga ee dhanka waxbarashada iyo halganka lagula jiro jahliga iyo saboolnimada.
Sidoo kale wuxuu mudane Cabdicasiis kahadlay heerka ay marayaan ardayda deegaanka ee jaamacadaha ku xaraysan taasoo uu sheegay in maanta lagu naaloonayo fursad waxbarasho oo aad u balaadhan sida dugsiyada, kuliyadaha, iyo jaamacada kuwaas oo ay ardayda deegaanku si buuxada uga faaiidaysanayaan. Wuxuuna tilmaamay dadaalka uu xibiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ugu jiro baabi'inta jahliga.
Soo dhawayntan ardayda ayaa xambaarsan ahmiyad xisbinimo iyadoo ay ardaydu kadhaxleen xafladan fahanka awaamiirta iyo heerka uu marayo XDSHSI oo maanta guulo badan kasoo hoyiyay horumarka DDSI.